Labo nin oo soomaali oo loo qabtay gacan ka hadal ka dhacay Tøyen oo la isku adeegsaday baangad iyo ul. - NorSom News
Labo nin oo soomaali oo loo qabtay gacan ka hadal ka dhacay Tøyen oo la isku adeegsaday baangad iyo ul.
Labo nin oo soomaali ah ayaa booliska Oslo ay u qabteen gacan ka hadal saacado kahor ka dhacay xaafada Tøyen ee magaalada Oslo. Sida uu wargayska dagbladet kasoo xigtay dad goob joog ahaa, waxaa gacan ka hadalkan ka qayb qaatay dad tiro ahaan gaarayo 10 qof, iyada oo la isku adeegsaday baangad iyo usha kubada laliska(cricket) lagu ciyaaro.
Booliska ayaa dhankooda sheegay in markii ay goobta soo gaareen ay dadkii ka qayb ahaa gacan ka hadalkan ay ukala carareen afarta gees. ayagoo intaas ku daray inay wali baarayaan sababta dhalisay arintan. Labada nin oo ay qabteen ayay sheegeen inay kasoo dhex qabteen taxi, iyada oo mid kamid ahna uu dhaawac kasoo gaaray bowdada.
Labada nin ayay boolisku sheegeen inay asal ahaan Soomaali yihiin, da ahaan ay jiraan labaatameeyo. Waxayna intaas ku dareen inay wali baarayaan lugta ay ku lahaayeen gacan ka hadalkan ay qaybta ka ahaayeen.
Previous articleWasaarada dastuurka Norwey oo ka codsatay Politidirektoratet inay si deg-deg wax uga qabtaan arinta (ukjent)
Next articleBaarlamaanka Norwey oo diiday ansixinta qodobo kamid ah kuwii ay soo jeedisay Sylvi Listhaug